Soo dejisan SUPERAntiSpyware 10.0.1216 Free Edition... – Vessoft
Qeybta: Sawireyaasha fayraska
Bogga rasmiga ah: SUPERAntiSpyware
SUPERAntiSpyware – software ah si aad u computer ka hanjabaado kala duwan oo ay ilaaliyaan. Software wuxuu ka ilaaliyaa habka ka fayras ee kala duwan, spyware, adware, Trojans, kolkaasaa dirxi galay iwm SUPERAntiSpyware baaritaanku drives adag, sidayaal xogta, diiwaanka ama fayl shaqsi nidaamka iyo locates faylasha cudurka ee karantiil. Software ayaa sidoo kale soo bandhigay warbixin faahfaahsan oo ku saabsan hanjabaad la ogaado iyo goobaha ay wargeyska wararka. SUPERAntiSpyware leeyahay interface fudud oo dareen leh.
Ilaalinta Reliable hanjabaado kala duwan
Fursadaha Wide ee scan ah
Updates database joogtada ah
Soo dejisan SUPERAntiSpyware
Faallo ku saabsan SUPERAntiSpyware
SUPERAntiSpyware Xirfadaha la xiriira
AdwCleaner – aalad loogu talagalay in lagu ogaado oo laga saaro modules-yada xayeysiinta ah. Softiweerku wuxuu si wax ku ool ah u saarayaa aaladaha qalabka, unugyada xayeysiinta iyo ku darista aan la rabin.
IObit Malware Fighter – waa aalad awood leh oo lagu ogaado khataraha qarsoon lagana saari karo basaasnimada xaasidnimada ah. Adeegga ayaa adeegsanaya tikniyoolajiyadda daruuraha si loo ilaaliyo wakhtiga-waqtiga dhabta ah.
FortiClient – antivirus wuxuu leeyahay macmiil ku dhexyaal VPN iyo heer heer sare ah oo ka ilaalin kombuyuutarka ka soo horjeedda kombiyuutarka, isla markaana si wax ku ool ah u ogaanaya fekerka.
Tani waa xalka antivirus ee shirkadda Symantec, mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha adduunka ee soo saarista software si loo ilaaliyo kombiyuutarada.
Antivirus Tani waxay leedahay database casri ah oo ku saabsan saxiixyada virus iyo tiknoolajiyada firfircooni si aad u ilaaliso kombiyuutarka ka dhan ah hanjabaad gudaha iyo network.
Ares – aalad lagu soo dejiyo laguna wadaago feylasha internetka. Software-ku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si deg deg ah u soo dejiso feylasha waxaana ku jira ciyaaryahanka ku dhegan inuu ciyaaro faylasha warbaahinta.
DC ++ – macmiil wadaaga faylalka wadaaga kaas oo u saamaxaya inuu daawado waxyaabaha ku qoran tusaha isticmaaleyaasha kale isla markaana kala soo bixi faylalka la xulay.